﻿Sidee Buu Buuga WADDANI iyo Shacab U Beddelaa Qarankeena? | Hayaan News
﻿Sidee Buu Buuga WADDANI iyo Shacab U Beddelaa Qarankeena?
Somaliland ilaa ay ka maqan tahay baahiyaha aas aasiga ah iyo baahiyaha aas aasiga ah, saamayn iyo deg deg ah midna ku yeelan mayso bulshada.
Hamiga iyo xamaasada leh ee bulshada waxaa loo hanqaltaagi karaa in dalka horumar loogu sameeyo meel ka baxsan bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasada.
Helitaanka qaranimada ummad gaar ah waxay ka timaadaa helitaanka daryeelka caafimaadka, daryeelka, waxbarashada, faa ‘ iidooyinka iyo khayraadka kale ee muhiimka ah-gaar ahaan shaqaalaysiinta oo u muuqata inay tahay arrimaha ugu dalabka badan.
Sadexdii sano ee Somaliland xornimada ahayd waxay ka faa ‘ iidaystaan khayraadka, shaqaalaysiinta iyo xilalka siyaasadeed-kuwo kalena way gaajoonayeen oo way dayaceen gabi ahaanba iyadoon la fiirsan aqoonsi iyo ictiraaf muujin waxay qaranku wadaagaan iyo dawladnimada.
Waa wax laga xumaado in bulshada lagu sameeyo isbedel muhiim ah oo lagu sameeyo waxbarashada iyo horumarka horumarineed ee mustaqbalka fog.
Sababtoo ah cadaalad darada iyo ismaqal la ‘aanta kajirta guud ahaan hay’ adaha dawlada.
Waa arin aad u adag in bulshada la baro qiimaha wadaniyadu leedahay iyo faaiidooyinkeeda qiimaha badan.
Madaxweynaha oo si cad u cadeeyey ciwaankiisa in beelaha waaweyn ee buuxinta boosaska baarlamaanka iyo xildhibaanada ay xisbigu ku kalsoon yihiin tirada codadka ay keeni karaan.
Waxaa hubaal ah oo aad looga soo horjeedaa buuga wadaniyada ee dhawaan la soo bandhigay in bulshada wanaag loogu badalo qabyaalad baahsan iyo kala qaybsanaan bulshada oo dhaqaaq kasta ku filan.
Lafta gareen iyo beelo waaweyn iyo beelo waaweyn fursad ma siin waayeen aqoonyahano dadaal iyo aqoon hore u soo kordhiya.
Xanuunka xuni wuxuu dilaa wadaniyada iyo midnimada bulshada waxay u muuqataa qabyaalad, nin jeclaysi iyo kala danbayn la ‘ aan sadexda sano ee somaliland xor ahayd.
Wadaniyada oo la barayo wadaniyadu waa in ay arkaan professoradooda koofiyada qaata oo dalka ku kaxeeya horumar la ‘ aan sinaanta, dimuqraadiyada iyo shaqaalaynta dastuurka.
Umad dimoqraadi ah oo soo koraysa waxay saartaa waayeelada iyo aqoontu ka buuxdo oo ay hogaaminayaan aqoon iyo aftahanimo muwaadiniinta mudan.
Marka kala qaybsanaanta lagu daro qaran burburka iyo kala qaybsanaanta kala qaybsanaanta shacabka halkii ay awood iyo aqoon leh ku dhiirigalin lahaayeen si ay ugu socdaan si wanaagsan.
Doorashada soo socota ee Jamhuuriyadda Somaliland shuruudaha shuruudaha shakhsiyaadka waxay noqon kartaa qabyaalad iyo kala danbayn aan tixgalin tayo, aqoon iyo sinaan lagu soo xulo musharixiinta.
Hase yeeshee buugga waddaniga ah ee dhawaan la soo saaray wuxuu ahaa wax aan macno lahayn mana shaqaynayso ilaa qof kasta oo muwaadin ah iyo dastuur kasta ay helaan caddaalad ku habboon oo xirfad leh.
Fiiri, dhab ahaanshuhu waxay daawayn kartaa kala fogaanshaha masiibada ama khilaafaadka, inkastoo ay yihiin kuwo daciif ah, kana tegi kara qaybaha bulshada.
Aasaasida qaran dumiska ah oo nolol iyo geeri la wadaagaya waxay soo bandhigtaa muhiimadda wadaniyadaas. Shacabka la dayacay oo la dafiray waligood ma baran barnaamijkaas.
Run ahaanti buuggu akhristayaal ma laha, marka hore waa muhiim in akhristayaashu si xiiso leh u abuuraan una gudbaan bulshada kale ee aan waxna qori karin waxna qori karin.
Aasaaska oo la dhiso ayaa ka fudud isku dayga in guri saqafka loo dhigo iyadoon la tirtirin gidaarada.
Cunsurinimada, boobka iyo dhibtu waxay dhacdaa marka qaranku inkirto qaar professoradeeda qaarna shaqaalaysiiyo.
Qabyaaladda, eexda iyo quudinta xaaraanta ah waxay dhacdaa marka wasiirrada ku caytamaan awoodooda mashruucyo iyo profile-ka siyaasadeed ee qoyskooda.
Xalka xalinta xaaladka oo dhan wuxuu u baahan yahay xeelad aad u xiiso badan iyo qorshayaal ka dhigaya jamhuuriyada Somaliland.
Wasiiradu waxay saamaynta iyo saamaynta ku yeesheen habraaca siyaasadeed ee Somaliland oo dad badani maskaxiyan iyo siyaasad ahaanba ka guuraan.
Dadaal iyo wada tashi wadajir ah ayaa nabad, horumar iyo barwaaqo u horseedaya qaranka jamhuuriyada Somaliland.
Barida dadka wadaniyadu waa qorshe dadka ka guuraya qabyaalada iyo dhamaan hawlaha somaliland ee ku saleysan qabyaalada iyo qoyska ganacsiyada.
Soo jeedinta aan awood lahayn ee aan la hubin weligeed ma dayactirto dhibaatada. Ilaa midawga dhabta ah ee umadu ka dhacdo oo shacab walba la maqlo lana tixgaliyo fikirkiisa qarankan.
Qofna xaq uma laha inuu igu khasbo aaminaad iyo laqis aad u qaraar iyo dawo khatar ah oo saamayn wayn ku leh mustaqbalka.
Caqligayga iyo aragtidayda dhismaha ah waxay xaqiijisaa wanaaga iyo barwaaqada umadan in looga faa ‘ iidaysan karo ummad dhan.
Shacabka la diidey waxay leeyihiin cod aad u muhiim ah oo gaadha beelaha caalamka oo si feejignaan leh u difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland ee bilaa faa ‘ iidada ah.
Buuga hagaha wadaniyada iyo shacabka ee la soo saaray ma furi karo dhibaatooyinka qarsoon ee halkan ka jira.
Go ‘ aaminta maanta beritoole guul iyo mustaqbal ifaya qofkasta oo muwaadin jamhuriyada somaliland ah oo aan lahayn fikir maskaxeed oo laf dhuun gashay ah.
Istaraatiijiyad ku meel gaar ah oo faaiido u leh jiilalka mustaqbalka waa in la helaa si daacad looga dhigo.
Muhiim doodeyda iyo doodaheyga ma daneeyaan ama kuma mashquulaan musuqmaasuq ama xumaan, muwaadiniinta inta badan waxay u gudbiyaan shakhsiyaad gaar ah. Laakiin badbaadadayda ayaa ka weyn oo mudnaan leh.
Aqoonyahan Cabdilaahi Xasan
Codkaygu waa mid aan la hubin run ahaantuna waxay muujinaysaa sifooyin waaweyn waxayna isku xidhaa shacabka galbeedka ilaa bari bandhigyada istaraatiijiyado badan oo faa ‘ iido leh.
Labada doorasho ee dhaawacaya dhaawaca ama bogsashada waxay lagama maarmaan u tahay nadiifinta qaran ee ka xoroobay dhamaan qalabyada burburinaya aas aaska qaran.
Adeega dibnaha marna kama talaalin qaran fayraska sida qabyaaladda-siyaasad ahaan waxaa la abuuraa mararka qaar ixtiraam siyaasadeed. Laakiin waxay ka tagtaa dhibaato aan la awoodi karin mustaqbalka.
Jamhuuriyada Somaliland waxay u baahan tahay waxqabad ee ma aha dibnaha oo qaranka lagu baro qiimaha iyo qadiyada wadaniyada.
Wadaniyadu waxay ka baxdaa helitaanka xuquuq siman iyo cadaalad qaybsiga khayraadka qaranka iyo awood qaybsiga muwaadiniinta ku raaxaystaan ama ku dhaqmaan sharciga.
Laakiin professoradeena beenta ah ma arkaan meesha nalku marayo, ama habka ay qaranka ugu beddelaan marxaladdan muhiimka ah.
Odayasheenu waxay ahayd inay helaan kala qaybsanaanta qotoda dheer iyo cinwaanka ka hor inta aan la barin qaranimada.
Waa wax laga xumaado in la jiido indhaha shacabka iyadoon la aqoonsan kala qaybsanaanteena qoto dheer.
Dagaalka joogtada ah ee lagu soo afjarayo kala qaybsanaanta bulshada wuxuu ahaa mudnaanta koowaad ka hor inta aan la istaagin kaalintaas jaamacadaha.
Waa ayaan daro guud oo xirfad iyo daacadnimo qarankaan ku wareejiyey odayaal si indho la ‘aan ah saqaf aan gidaar la’ aan jirin.
Bukaanka oo la siiyo qoraal ka hor inta aan la ogaanin iyo ogaanshaha xanuunada waxay u muuqataa in ay caafimaadkiisu adag yahay.
Professoradeena aan la hubin tabarucaadka isbeddelka dalka ee dhawaan ka dhacay waa in ay aqoonsadaan jiritaanka kala qaybsanaanta.
Xumaanta qaranka ee arimaha jira oo la xidhiidha fikir caafimaad qaba iyo xal la imanaya waxay ku gaadhsiisaa xaqa si aad ugu badbaado qaran xor ah.
Aqoonso oo ka hadal dood badan iyo dood badan runta ha iska indho tirin dildilaacyadu yayna sii weynaan.